XOG:- Galmudug Oo Xaaladii Ugu xumeeyd Ku Jirta & cadeeymo muujinaya sababta khilaafka oo la helay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 17 November 2018 18 November 2018
Cadaado ( Mareeg News ) Sarkaal ka tirsan masuuiyiinta sida gaarka ah ugu dhow Madaxweynaha Maamulka Galmudug ayaa Mareeg.com u sheegay in shaqsiga faragalinta ku haya Siyaasadda iyo arrimaha Galmudug uu yahay Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre.
Madaxweyne Xaaf ayaa ku dhex jira siyaasad faraha kasii baxeysa iyadoo maalin kasta Khilaafka Madaxda Galmudug uu kasii daranayo.
Sarkaalka ayaa inoo sheegay in Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya laga fara galiyo Maamulka Galmudug, isagoo adeegsanaya Madaxweyne ku xigeenka iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug.
Xildhibaano iyo Siyaasiyiin ku sugan Magaalada Muqdisho oo kasoo jeeda Deegaanada Galmudug ayaa hore Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ugu eedeeyay inuu ka dambeeyo Xasilooni la’aanta siyaasadeed ee Galmudug.
Qoraal ka soo baxay Galmudug ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda burburinta heshiiskii ay wada galeen Ahlu Sunna iyo Galmudug inay u adeegsaneyso Wasiiro iyo Xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka oo gaaray magaalada Cadaado, iyaga oo adeegsanaya dhaqaale fara badan.
Dad badan ayaa isweydiinaya sababta Dowlada dhexe ay wax kaga qaban la’dahay Khilaafka iyo Xiisada ka taagan Galmudug.
Mareeg.com xafiiska muqdisho Email: info@mareeg.com